Ogaden News Agency (ONA) – Shir ay soo qabanqaabiyeen Jaaliyadda Ogaadeenya ee waddanka Norway
Shir ay soo qabanqaabiyeen Jaaliyadda Ogaadeenya ee waddanka Norway
Oslo: Waxaa maanta oo ay taariikhdu tahay 10/02/2013 kulan si aad u qurux badan loo soo abaabulay isugu yimid xubnaha Jaaliyadda Soomaalida Ogadenia ee ku dhaqan caasimaddaOslo iyo nawaaxigeeda. Shirka oo ahaa midkii koobaad ee ay yeeshaan xubnaha Jaaliyadda iyo maamulka dhawaanta la doortay, ayaa lagu furay aayado kamid ah Quraanka Kariimka ah oo uu akhriyey Sheekh Abdirahman Yusuf.
Intaa kadib, waxaa goobta ka hadlaya Gudoomiyaha Jaaliyadda Xaaji Abdullaahi oo soo bandhigay qorshayaal dhawr ah oo isugu jira sidii kor loogu qaadi lahaa hawlaha shaqo ee la filayo in Jaaliyaddu ku talaabsato bilooyinka soo socda.
Shirkan oo ay isugu yimaadeen xubnaha kahawl gala Caasimadda Oslo iyo nawaaxigeeda & Madaxa Hogaanka Arimaha Ururka ee JWXO Xaaji Mohamed Yusuf , ayaa lagu ballamay sidii wada jir looga wada-midho dhalin lahaa dhamaan qorshayaasha lasoo bandhigay.
Sidoo kale, mihiimada shirka ayaa ahayd sidii xubnahu u kulmi lahaayeen ugana wada hadali lahaayeen kobcinta wax qabadkooda Halgan.
Waxaana ka mid ahaa qodabada ay xubnahu kawada doodeen.
· Xoojinta halganka hubaysan ee ay majaraha siyaasadeed & midka mulatariba u hayso Jabhada waddaniga Xoreynya Ogaadeenya ee kasocda gudaha Ogaadeenya.
· Ka hortaga dabinka uu maleegayo gumaysigu oo ah mid kolba shaati horleh soo xidhanaya waa jibna ay kutahay shaqsi walba oo xalaal ah una dhashay Ogaadeenya in uu ka feejignaado.
· Isku-xidhka dhamaan shacabka S. Ogadenia ee ku dhaqan dalkaNorwayiyo xoojinta ururada Bulshadda Ogadenia ee kajiraNorwaysi ay wadamada aduunka u gaadhsiiyaan dhibaatooyinka gumeysigu ku hayo shacabka Ogadenia
Dadaalka ay wado JaaliyaddaNorwayoo ah mid aad u balaadhan & sidii ay usii xoojin lahaayeen taas oo ay xubnaha qaar ku nuux-nuusadeen sidii kor loogu qaadi lahaa.
Shirkaas oo ahaa mid ku dhamaaday jawi aad u qurux badan ayaa ah mid ay xubnuhu isku af-garteen in ay qodabadaas & kuwo kaleba kaqaadaan talaabo wax ku ool ah.